Bun nesinamoni - ukunambitheka ebuntwaneni
Okugcwele enongiwe, Bun elimnandi noshukela nesinamoni - yini enye engcono kunalokhu zokunambitha, umngane kusuka ebuntwaneni? Pheka lesi sidlo ikani kanye ekhaya. Ukuze sasekuseni namakhekhe enjalo kungaba wusizo kakhulu. Bun nesinamoni - lokhu isidlo zakudala, okungaletha okuhlukile. Ake sixoxe ngalokhu esihlokweni sethu.
Yiqiniso, ungakwazi ukuthenga amakhekhe ngomumo eyenziwe esitolo. Kodwa Bun nesinamoni, kuphekwe izandla zabo azokuthanda nabezindlu zenu ngaphezulu. Ukulungisa isidingo ukuthatha 10 amagremu of imvubelo (kungenzeka ezomile), amaqanda amabili, 150 amagremu ushukela, iphakethe imajarini, ubisi ilitha, ezimbili amakhilogremu kafulawa, ingcosana usawoti, usinamoni, i-vanilla amafutha zemifino. Ukuze uqale, Ncibilikisa imajarini mix it ne ubisi.
Ingxube kufanele ukufuthelana degree angaba ngu-40. Alulaze it in ushukela, vanilla nosawoti. Ngemva kwalokho Thela nemvubelo. Manje kufanele ulinde kancane ukuze imvubelo asebenzayo. Okulandelayo, hlanganisa amaqanda nofulawa (300 amagremu). Sponge kufanele sibeke endaweni efudumele. Ngemva kwesikhashana ke uyovuka. Kuleli qophelo, kubalulekile ukuba uthele ufulawa xaxa inhlama Kwatholakala cool. Beka emuva ku endishini amboze ithawula. Inhlama kufanele ivuke ukuze Bun nesinamoni waphenduka emnene. Ngemva kwalokho, nginqume kulo wenze cishe ingxenye eyodwa kwezintathu isoseji, okuyinto thina wahlukanise izingcezu ezincane. Ukhiphe tortilla ufafaze kubo nesinamoni kanye noshukela. Khona-ke Roll off umqulu ugoba emkhatsini. Imbobo emaphethelweni nesibaya, ukwembula ngobumnene ufafaze ushukela. Buns etholakala ngohlobo inhliziyo. Bhaka ezingeni lokushisa 50 degrees kwemizuzu engu-15, bese okwandisa izinga lokushisa ukuze 180-200 degrees. Bun nesinamoni ngomumo.
Akumangalisi ukuthi angasebenzi eziningi, izindlela eziningi kangaka. chef ngamunye has iresiphi sakhe esikhethekile futhi abanye izimfihlo ukupheka. Thatha izinkomishi amathathu empuphu, nezinkezo ezimbili ezinkulu ushukela, 200 amagremu eliphezulu imajarini, ingilazi yobisi, 2 nezinkezo elincane imvubelo elomile, ingcosana usawoti, 50 amagremu ibhotela, usinamoni noshukela ukugcwaliswa. Bun nesinamoni, iresiphi zazo kuhlongozwa ngezansi - kuba uswidi okumnandi ngesidlo sasekuseni.
Ukuze uqale ebesengenile imvubelo kanye usawoti bese wengeza kubo ushukela nobisi. Khona-ke wabeka imajarini (sashintsha) nofulawa. Inhlama eqeda kufanele sibeke efrijini amahora 6. Ngemva kwalokho ungakwazi akha Bun. Hlukanisa inhlama ibe yizicucu futhi ukhiphe amaqebelengwane amancane. Beka ukugxusha phezulu, ivule umqulu, imbobo yakhe, senza okuthandekayo ulitochki. Fafaza ushukela ubhake nabo kuhhavini at 180 degrees.
Inhlama ukhilimu omuncu
IZindaba Zasendulo ukuthi namabhanisi wenza kusukela imvubelo inhlama. Ubuchwepheshe kakhulu esifanayo ukulungiselela kanye nendlela okwakheke ngayo izithako ziyahlukahluka. Nakhu okunye okukhethwa kukho. Kuyadingeka ukuthatha isigamu inkomishi yobisi, amaqanda amathathu, 25 amagremu of imvubelo fresh, amagremu 100 ibhotela noma izinga imajarini, inkomishi ushukela inhlama, futhi isigamu ingilazi ku posypku, ingcosana usawoti, vanilla, 600 amagremu kafulawa, usinamoni, nokungu-50 ml amafutha zemifino. Zonke izithako kufanele lizwakale linemfudumalo, ngakho kangcono ukuthola ngaphandle esiqandisini. Sidilike imvubelo endishini bese ugcwalisa kubo ubisi, efudumele kuphela. Futhi, engeza ushukela kancane nofulawa.
Hlanganisa isiponji ushiye endaweni imizuzu efudumele at 15. Endaweni ehlukile, beat amaqanda nge ushukela, usawoti kanye ukhilimu. Manje, uhlanganise lezi Izingxube ezimbili nengxenye ufulawa futhi ngobumnene ugovuze. Thina futhi wabeka isipanji endaweni efudumele imizuzu 30. Melt ibhotela kuphole yona ekamelweni lokushisa. Awathele ekhofini bese wengeza ufulawa esisele. Uxove inhlama ngikudedele. Kuthatha amahora mayelana 1.5. Ngemva kwalokho wakha Bun nesinamoni kanye noshukela ubhake nabo kuhhavini.
Buns nesinamoni futhi Sesame imbewu
Leresiphi kuyinto engavamile, ngoba ngaphezu nesinamoni kuwo kukhona Sesame. Nokho, liphinde kuwufanele ngizame. Ukuze silungiselele inhlama uzodinga 500 amagremu kafulawa ezinhle sifted, 10 amagremu kasawoti, 75 amagremu ushukela, amagremu 100 ibhotela, 200 ml amanzi afudumele, amaqanda amabili kanye 12 amagremu of imvubelo elomile. Ukuze ukugcwaliswa kubalulekile ukuthatha kancane samafutha zemifino, ushukela, izinhlamvu ze-sesame nesinamoni. Imvubelo, azihlanganise ufulawa, kubo ushukela, usawoti, amaqanda, amanzi afudumele ne bhotela.
Uxove inhlama nilishiye libe imizuzu 50 endaweni efudumele. Khona-ke kancane cindezela phezu kwakhe futhi linda imizuzu engu-30. Ungabese ukunikeza ifomu efanele bhisikidi. Sikwenza lokhu ngendlela efanayo njengoba kule iresiphi odlule. Bhaka le namabhanisi nesinamoni, okuyinto inezithombe kulesi sihloko, cishe imizuzu engu-20. Amazinga kuhhavini kufanele kube ngu-200 degrees.
Ukuze uthole ehla esiphundu ngempela, kuzomele ulandele iseluleko. Okokuqala, kubalulekile ukuba sinike inhlama izikhathi ezimbalwa ezizayo, kuyilapho namabhanisi zithambile futhi ithenda. Okwesibili, ngaphambi ufafaze nesinamoni namabhanisi (isithombe se-baking siphelile, uzothola kulesi sihloko), ukuxubha inhlama ngamafutha zemifino. Kungcono ukuqala ukubhaka uswidi kuhovini kancane evuthayo, kancane okwandisa izinga lokushisa. Kungenziwa wathela phezu namabhanisi fondant ngomumo noma uqweqwe lukashukela. Bon appétit!
Amakhekhe Festive ngoba amantombazane ngesimo cartoon abalingiswa
Ikhuphoni Iwebhusayithi: ukwethemba noma hlola?
EMoscow: edolobheni, incazelo yabo
Windows ayikwazanga ukuqala Centre Ukuphepha: indlela yokulungisa le nkinga?